Umphumela Wesiphepho uHarvey | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umphumela Wesiphepho uHarvey
UClaudi Casal | | Iziphepho, Isimo sezulu
Isiphepho uHarvey, esivela kusathelayithi
Sekuphele isonto sabhala ngesiphepho esingahlasela iTexas, isiphepho harvey. Ize yafinyelela esigabeni 4, amandla amakhulu kakhulu kunokulindelekile. Umonakalo oshiye ngemuva mkhulu kakhulu kunalokho obekulindelekile. Futhi ngemuva kwaso sonke lesi sikhathi ukushaya indawo izoqhubeka nokuthuthela enyakatho njengesiphepho esishisayo ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo.
Umonakalo okhiqiziwe ubangelwe ikakhulu yi- Ukuma kukaHarvey kule ndawo, wahlala isikhathi eside endaweni eyodwa. Lolu hambo olungavamile lwabangela izikhukhula eHouston, kuze kufike ezingeni lokushaya i- irekhodi lezikhukhula lahlupheka ezwenikazi i-United States. Irekhodi langaphambilini lakhiqizwa iSiphepho u-Amelia ngo-1978, esina kakhulu imvula engama-intshi angama-48. IHarvey ishaye ngamasentimitha angama-51,88 (ngaphezu kwamamitha ayi-1,30) ngoLwesibili, kanti kulindeleke imvula eningi.
1 UTrump uvakashela indawo ethintekile
1.1 Amachibi agcwala ngokweqile
2 IColdplay iqamba "iHouston" ngokuhlonipha labo abathintekile
UTrump uvakashela indawo ethintekile
UTrump ubumbene nabo bonke labo abathintekile endaweni (Izindaba ze-NBC)
Ngesikhathi nje uTrump evakashele indawo ethintekile, amadamu amabili agcwale amanzi izolo. Imiphumela kaHarvey evutha ngolaka kule ndawo sengathi ayisoze yaphunyuka, iphoqeleke ukuba isuse indawo eseningizimu-mpumalanga yeHouston, indawo ethinteke kakhulu.
Isibalo sesivele sikhuphuke safinyelela kwabangu-16, izinkulungwane zabantu zitakuliwe, kwathi amashumi ezinkulungwane asuswa kule ndawo, iningi lendawo yaseHouston, njengamanje ligcwele amanzi. Futhi idolobha lesine elinabantu abaningi e-United States, elinabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili. Izindleko zokulimala sezivele zikhuphukele ezingeni lomonakalo owadalwa yisiphepho uKatrina ngo-2, esenzeka naphakathi kuka-Agasti 2005 no-23.
Lokhu kunokulingana okukhulu. Akekho owake wabona okufana nakho »Lawa ngamazwi kaDonald Trump emhlanganweni owawubanjelwe eCorpus Christi, futhi usihlalo wawo kwakunguMphathi waseTexas, uGreg Abbot. Umongameli waseMelika uthathe ithuba lokubona nokuncoma umsebenzi wezindikimba ezisebenzisana nokusiza labo abathintekile. Nxusa futhi ukhuthaze ukukwenza "okungcono kunakuqala", ukuze eminyakeni emihlanu noma eyishumi kungashiwo ukuthi akwenziwa konke okwenzekayo. Ezinye izithombe ze-panorama zinikezwe kule vidiyo kusuka ezindabeni ze-FOX. Ngaphezu kwalokho, Iphinde iphawule ngemiphumela yezifo ezingaba nayo, izinambuzane ezinjengomiyane, ukungezwani nezinto ezithile komzimba, njll.
Amachibi agcwala ngokweqile
Imiphumela yokuchichima kwamachibi amadamu, amadamu eBarker ne-Addick, ibonakala kulezi zithombe ezilandelayo. Kangangokuthi INational Meteorological Service kudingeke ukuthi ingeze imibala emibili ebalazweni ekala imvula. Ngokomlando, imephu ibanjwe imvula ngamasentimitha ayi-15, kusukela manje ikepisi elisha lizoba ngamasentimitha angama-30. Siyabona umehluko ezilinganisweni emephini ovela kuminithi 1:20 wevidiyo.
Imvula elindelwe kule ndawo cishe ngamayintshi ama-5 ngosuku izinsuku ezingama-2/3 ngaphezulu. Amazinga omfula anomlando, njengezikhukhula. Kulindeleke ukuthi, ngaphezu kwesibalo salabo abathintekile, ku ezinsukwini ezizayo abantu abangaba ngu-450.000 XNUMX bacela usizo ngemiphumela yemiphumela etholakalayo.
IColdplay iqamba "iHouston" ngokuhlonipha labo abathintekile
Iqembu laseBrithani, linikele ngengoma ethi "Houston", layidlala okokuqala nokugcina ekhonsathini eyayiseMiami, eFlorida. "Sikhule siwuthanda umculo wezwe, futhi yilokho esikucabangayo lapho siya eTexas"kusho lo mculi nombhali wengoma yeColdplay ngenjabulo ngesikhathi sekhonsathi.
Izinkulungwane zabantu zinikele kulolu sizo, futhi ezinye izindaba ngeke zaziwe. Ngisho nentatheli emise imoto yamaphoyisa ukusiza umshayeli weloli owayengakwazi ukuphuma elolini lakhe. Ekugcineni le ndoda ingasindiswa, yabonga kakhulu futhi yabonga ngalokho ababemenzele kona.
Sivalelisa sishiya ukuqoshwa kwale ngoma kaColdplay esiteshini sayo esisemthethweni. Ukusuka lapha siyethemba ukuthi leli dolobha elikhulu lapho uthunyelwa khona emkhathini, ululama kahle kakhulu futhi ngokushesha okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Umphumela Wesiphepho uHarvey
Idamu laseMansilla lishiya idolobha limbozwe yisomiso
Ukubala kanjani ukubanda komoya?